Imisa daqiiqo ayuu fiidiyowga 4K ku qaadanayaa iPhones-ka cusub? | War gadget
Qolka Ignatius | | Mobiles, Kaamirada
Ma aqaan sababaha keenay inay wiilasha ka soo kaxeeyaan Cupertino sii wad inaad soo bandhigto moodal qiimihiisu yahay ku dhowaad 800 oo euro oo ah tusaale aasaasi ah oo keliya 16 GB, marka aaladaha isku midka ah ee qiimaha leh ee Android ay bixiyaan ugu yaraan 32GB oo keyd ah. Arrinta Apple xitaa waxay ka sii culus tahay iyadoo la tixgelinayo in aaladuhu aysan oggolaanaynin in lagu ballaariyo meel dheeri ah, sidaa darteed haddii aan ka weyno qalabkayaga qalabkeenna xalka keliya ayaa ah in la tirtiro codsiyada, fiidiyowyada, muusigga ama wax kasta oo xilliyadaas la qaadanayo. meel ka badan intii caadiga ahayd.
Moodooyinka cusub ee iPhone, sida aalado kale oo badan oo horeyba u shaqeyn kara, waxay ku duubi karaan tayada 4K. Cabirka fiidiyowyada lagu duubay tayadaani waa mid aad u ballaaran, taas oo nagu qasbeysa inaan horey u faaruqino qalabka hadii aan rabno inaan si joogto ah u duubno dhacdo gaar ah oo naga qaadan karta waqti ka dheer sidii caadiga ahayd.
Si ka duwan macluumaadka aan ka heli karno goobaha fiidiyowga ee iOS 8 moodelkii hore ee iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus, halkaasoo fiidiyowyada laga duubay 60 fps ay dagi karaan aan la tusin (tayo sare leh suurtagal), iyadoo iOS 9 cusub Moodooyinka iPhone ayaa la soo bandhigay shalay, haddii aan tusi hage yar oo meesha lagu muujinayo meesha bannaan ee ay deggan yihiin daqiiqad kasta oo la duubay tayada kaladuwan ee la heli karo.
Daqiiqad kasta oo duubitaan ah 4K tayada ayaa degan / leh miisaan dhan 375 MB.
Daqiiqad kasta oo duubitaan ah Tayada 1080p HD ee 60 fps ayaa degan / waxay leedahay miisaan dhan 200 MB.
Daqiiqad kasta oo duubitaan ah 1080 HD tayada 30 fps ayaa degan / miisaankiisu yahay 130 MB.
Daqiiqad kasta oo duubitaan ah Tayada 720p HD ee 30 fps ayaa degan / waxay leedahay miisaan dhan 60 MB.
Xogtaas oo ay bixisay iOs 9, oo murugo leh 16 GB oo ay bixiso nooca ugu aasaasiga ah ee iPhone Kaliya waxaan qori karnaa 35 daqiiqo tayada 4K, Taas oo loo maleynayo in aan leenahay qalab gebi ahaanba nadiif ah, oo kaliya lagu rakibo iOS 9 oo ay la socdaan dhammaan codsiyada hooyo, taas oo naga dhigeysa meel bilaash ah oo bilaash ah oo qiyaastii ah 14 GB.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Imisa daqiiqo ayuu fiidiyowga 4K ku qaadanayaa iPhones-ka cusub?
Sababta waa fududahay: in dadku iibsadaan 64gb haa ama haa, taasi waa, waxay si fiican u yaqaanaan in 16gb aysan ku filneyn iyagoo og in waqti kasta oo wax walba ay qabsadaan meelo badan (barnaamijyo culus, 4k, iwm). Salaan sharaf cinwaanka cusub ee mr. Cook ma iila muuqato mid ila habboon, iPhone-ka casaanka ah tusaale ahaan, sida saxda ah waaxda loogu talagalay sheygan? Ma u noqon doontaa inta badan dadka isticmaala? Ama aakhirka waa la iibin doonaa sida iphone c? Waxay ka fiicnaan laheyd batteri badan iyo Bluetooth oo u shaqeeya sidii la rabay. Ma aha in la xuso saacadda Apple ee buunbuuninta qaaliga ah waxa ay tahay, ama isku daygii dib u soo nooleynta iPod-ka.
Loot Crate ayaa ugu dambeyntii yimid Spain
Apple TV jiilka 4aad vs Apple TV jiilka 3aad